Uzuzu Topiramate (97240-79-4) hplc =98% | AASraw Fat Loss powder
Topiramate ntụ ntụ
/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / Topiramate ntụ ntụ
SKU: 97240-79-4. Category: ndị ọzọ na-
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Topiramate uzuzu (97240-79-4), n'okpuru usoro CGMP na usoro njikwa mmachi.
Topiramate uzuzu vidiyo
Raw Topiramate ntụ ntụ bụ isi Characters
aha: Topiramate ntụ ntụ
Molekụla Formula: C12H21NO8S
Ọbara arọ: 339.36
Melt Point: 125 ° C
Raw Topiramate ntụ ntụ na nhalata ọnwụ
Topiramate ntụ ntụ, Topomax, Qudexy XR, Topamax fesa, Topiragen, XR Trokendi
Raw Topiramate ntụ ntụ Usage
Uzuzu Topiramate bụ ọgwụ oral nke a na-eji egbochi njide nke epilepsy. Ọ bụ ọgwụ mgbochi ọrịa ma ọ bụ ọgwụ mgbochi. A na-eji ya eme ihe karịsịa n'etiti ndị ọrịa ndị ọgwụ ọjọọ ndị ọzọ na-adịghị achịkwa. Banyere 1 na 4 America ndị a chọpụtara na epilepsy nwere ihe ndị na-egbochi ọgwụgwọ na ọgwụ ndị ọzọ na-emegide ọrịa. Toperamate ntụ ntụ na - egbochikwa isi ọwụwa ụkwụ.
Ọkpụkpụ na-akpata ụbụrụ (ụbụrụ ") nke irighiri akwara na ụbụrụ, na ọrụ ọjọọ ahụ na-agbasa na akụkụ ma ọ bụ karịa karịa nke ụbụrụ. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe omuma nke Topiramate ntụ ntụ bụ ihe omuma, ihe ọmụmụ sayensị na-egosi na ọ nwere ike ịgbanwe ndị na-ahụ maka ụbụrụ n'ime ụbụrụ. Ndị Neurotransmitters bụ kemịkal na-emepụta nsị ma jiri ya na nkwarụ ndị ọzọ dị nso na-ekwurịta okwu. Site n'ịgbanwe mmepụta ma ọ bụ mmemme nke ndị na-ahụ maka ntanetị, ntụpọ Topiramate nwere ike igbochi ọrụ ọjọọ nke irighiri akwara na ụbụrụ nke na-eme ka mgbochi ma ọ bụ nwere ike igbochi ọrụ ọjọọ ahụ na-agbasa na mmetụta ndị ọzọ. Nnyocha ndị ọzọ na-egosi na ntụ ntụ Topiramate nwere ike igbochi irighiri akwara (yabụ, ọ bụghị site n'ịgbanwe ndị ntanetransmitters) ma mee ka ha ghara ire ọkụ.
Soro ntuziaka dọkịta gị. Kpọọ ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla. N'ikpeazụ, dọkịta gị ga - agwa gị ka ịmalite site n'iji otu mbadamba 25-milligram ugboro abụọ kwa ụbọchị. Mgbe obere oge gasịrị, dọkịta ahụ nwere ike jiri nwayọ mụbaa usoro ọgwụgwọ iji mee ka njide gị dị mma karị. N'ihi na a na-ewerekarị ntụ ọka Topiramate ugboro abụọ n'ụbọchị, ọtụtụ ndị na-enyere onwe ha aka icheta site na iji ya na ụtụtụ na nri abalị. Jụọ dọkịta ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị chefuo iji ọgwụ.
Ụdị ụdị nke Topamax nwere ike iji ma nri ma ọ bụ na-enweghị nri, ma ọ kachasị mma ịnọgidesi ike site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị.
Lezie anya ma ọ bụrụ dọkịta na-ede akwụkwọ ọgwụ ọhụrụ iji ụdị ọgwụ dị iche. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-eji mpempe akwụkwọ 25-mg na akwụkwọ ndenye ọhụrụ bụ maka mbadamba 100-mg, kpachara anya iji ọnụ ọgụgụ ziri ezi. Emela na-akpaghị aka na-eji otu mkpụrụ ọgwụ ahụ dịka ọ dị na mbụ. Jide n'aka na ị maara nhazi akwụkwọ dị elu.
Ọ bụrụ na ị na-ewere mbadamba nkume, kpochapụ onye ọ bụla. Emela ya. (Ọ ga-abụ ilu dị ilu.)
Gwakọta capsules bụ ụzọ dị mfe inye Topamax ụmụaka na ndị ọzọ nwere nsogbu ịnweta ọgwụ. A na-ekpochapụ capsules dum, mana ha na-emeghe ma na-etinye ihe ndị dị na ya na teaspoon nke nri dị nro dịka applesauce, custard, ice cream, oatmeal, pudding, ma ọ bụ yogọt. Nke a bụ usoro:
Nweta teaspoon nri dị njikere.
Jide capsule ziri ezi ka ị nwee ike ịgụ okwu "TOP".
Jide capsule n'elu nri ma wepụ akụkụ doro anya nke capsule.
Wụsa ihe niile capsule na nri.
Gbano nri ahụ dum n'egbughị oge. (Ọ ga-atọ ụtọ ilu ma ọ bụrụ na a na-ata ya.) Ịṅụ mmiri ma ọ bụ mmiri ọzọ ozugbo ahụ nwere ike inyere aka hụ na nri niile dị. Echekwala ọgwụ ọ bụla agwakọtara na nri iji mee ihe n'ọdịnihu.
Jide n'aka na ị na-ewere ego ole dọkịta gị gwara gị ka iwere.
Ịdọ aka ná ntị n'elu ntụ ọka Topa
Ihe ndị kachasị emetụta Topiramate ntụ ntụ bụ:
mgbanwe n'ọhụụ ma ọ bụ
tingling ma ọ bụ na-egbu egbu mmetụta na aka na ụkwụ,
nsogbu na ebe nchekwa, na
Mmetụta ndị ọzọ dị mkpa gụnyere:
mụbara ọkwa dị elu amonia,
mgbada elu, na
ọnụ ọgụgụ dị elu nke mmiri.
Fọpụ Topiramate nwere ike imebi nwa na-amụbeghị amụ, ma inwe njide n'oge ime nwere ike imerụ ma nne ma nwa. Gwa dọkịta gị ozugbo ma ọ bụrụ na ị dị ime mgbe ị na-ewere Topiramate ntụ ntụ maka ịdọ aka. Akwụsịla ma ọ bụ kwụsị ịnya uzuzu Topiramate n'oge ime nwa na-enweghị ndụmọdụ dọkịta gị.
Chọọ nlekọta ahụike mberede ma ọ bụrụ na ị nwere mgbanwe mberede na ọhụụ ma ọ bụ ihe mgbu na gburugburu anya. Ndị a nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama mbụ nke mmetụta dị egwu na nke na-adịgide adịgide n'ọhụụ gị.
Akwụsịla iji Topiramate ntụ ntụ n'ebughị ụzọ gwa dọkịta gị, ọ bụrụgodị na ọ dị gị mma. I nwere ike inwe ọganihu dị ukwuu ma ọ bụrụ na ị kwụsị iji Topiramate ntụ ntụ na mberede. I nwere ike iji obere ma ọ bụ obere tupu ị kwụsị ọgwụ ahụ kpamkpam.
Kpọtụrụ dọkịta gị ma ọ bụrụ na ọrịrị gị na-aka njọ ma ọ bụ na ị na-ahụ ha mgbe mgbe na-ewere Topiramate ntụ ntụ.
Fluid ntụpọ Topiramate
Raw Topiramate ntụ ntụ Marketing
Otu esi azụta Topiramate ntụ ntụ si AASraw
Topiramate Ntụ ntụ ntụ ntụ ntụziaka:
Kedu ka esi eji Topiramate uzuzu maka ubu ibu?